10.02.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच ्चे– सबैलाई यो खुशीको खबर सुनाऊ विश्व अब फेरि स्वर्ग बनिरहेको छ । स्वर्ग स्थापन गर्ने परमपिता परमात्मा आउनु भएको छ।”
जुन बच्चाहरूलाई स्वर्गको मालिक बन्ने खुशी छ, उनीहरूको निशानी के हुन्छ?
उनीहरूको मनमा कुनै पनि प्रकारको दु:ख आउन सक्दैन। उनलाई नशा रहन्छ– म त धेरै महान् व्यक्ति हुँ, हामीलाई बेहदका बाबाले यस्तो (लक्ष्मी-नारायण) बनाउनु हुन्छ। उनीहरूको चालचलन धेरै रोयल हुन्छ। अरूलाई खुशीको खबर नसुनाइ बस्न सक्दैनन्।
बाबाले सम्झाउनु हुन्छ, बच्चाहरूले जानेका छन्– सारा दुनियाँलाई यो सन्देश पुर्याउनु छ। तिमीहरू सबै सन्देशी हौ, धेरै खुशीको सन्देश सबैलाई दिनु छ– विश्व अब फेरि स्वर्ग बनिरहेको छ अथवा स्वर्गको स्थापना भइरहेको छ। जसलाई स्वर्ग स्थापना गर्ने परमपिता परमात्मा भन्छन्, उहाँ नै यहाँ स्वर्ग स्थापना गर्न आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई निर्देशन छ– यो खुशीको खबर सबैलाई राम्ररी सुनाऊ। हरेकलाई आफ्नो धर्मको चासो हुन्छ। तिमीलाई पनि चासो छ, तिमीले खुशीको खबर सुनाउँछौ, सूर्यवंशी देवी-देवता धर्मको स्थापना भइरहेको छ अर्थात् विश्व फेरि स्वर्ग बनिरहेको छ। यो खुशी मनमा रहनु पर्छ– हामी अब स्वर्गको मालिक बनिरहेका छौं। जसलाई भित्रैबाट यो खुशी छ, उनलाई त कुनै किसिमको दु:ख हुन सक्दैन। यो त बच्चाहरूले जानेका छन्– नयाँ दुनियाँ स्थापना हुँदा कष्ट पनि हुन्छ। अबलाहरूमाथि कति अत्याचार हुन्छ। यो सदैव बच्चाहरूको स्मृतिमा रहनु पर्छ– हामीले सबैलाई बेहदको खुशीको खबर सुनाउँछौं। जसरी बाबाले पर्चा छपाउनु भएको छ– भाइ-बहिनीहरू! आएर यो खुशीको खबर सुन्नुहोस्। सारा दिन चिन्तन चलिरहन्छ कसरी सबैलाई यो सन्देश सुनाउँ। बेहदका बाबा बेहदको वर्सा दिन आउनु भएको छ। यी लक्ष्मी-नारायणको चित्रलाई देखेर त सारा दिन हर्षित रहनु पर्छ। तिमी त धेरै महान् हौ त्यसैले तिम्रो कुनै पनि असभ्य चालचलन हुनु हुँदैन। तिमीले जानेका छौ– हामी बाँदर भन्दा पनि धेरै खराब थियौं। अहिले बाबाले हामीलाई यस्ता देवी-देवता बनाइरहनु भएको छ, कति खुशी हुनु पर्छ। तर अचम्म छ बच्चाहरूमा त्यो खुशी हुँदैन । न त्यो उमङ्गबाट सबैलाई खुशीको खबर सुनाउँछन्। बाबाले तिमीलाई मेसेन्जर बनाउनु भएको छ। सबैको कानमा यो सन्देश दिइराख। कसैलाई यो थाहै छैन– हाम्रो आदि सनातन देवी-देवता धर्म कहिले रचना गरियो? फेरि त्यो धर्म कहाँ गयो? अहिले त केवल चित्र छन्। अरू सबै धर्म छन्, केवल आदि सनातन देवी-देवता धर्म छँदै छैन। यहाँ नै चित्र छन्। ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्नुहुन्छ। तिमीले सबैलाई यही खुशीको खबर सुनाऊ अनि तिमीलाई पनि मनमा खुशी हुन्छ। प्रदर्शनीमा तिमीले यो खुशीको खबर सुनाउँछौ नि। आएर बेहदका पिताबाट स्वर्गको वर्सा लिनुहोस्। यी लक्ष्मी-नारायण स्वर्गका मालिक हुन् नि। फेरि ती कहाँ गए? यो कसैले पनि बुझ्दैन। त्यसैले भनिन्छ– अनुहार मनुष्यको, स्वभाव बाँदरको जस्तो छ। अहिले तिम्रो अनुहार मनुष्यको छ, स्वभाव देवताहरूको जस्तो बनिरहेको छ। तिमीले जानेका छौ– हामी फेरि सर्वगुण सम्पन्न बन्छौं। फेरि अरूलाई पनि यो पुरुषार्थ गराउनु छ। प्रदर्शनीको सेवा त धेरै राम्रो छ। जसलाई गृहस्थ व्यवहारको बन्धन छैन, वानप्रस्थी छन् अथवा विधवा छन्, कुमारीहरू छन् उनीहरूलाई त सेवा गर्ने अवसर धेरै हुन्छ। सेवामा लाग्नु पर्छ। यतिबेला विवाह गर्नु बर्बाद हुनु हो, विवाह नगर्नु राम्रो हो। बाबा भन्नुहुन्छ– यो मृत्युलोक पतित दुनियाँ विनाश भइरहेको छ। तिमी पावन दुनियाँमा जानको लागि यो सेवामा लाग्नु पर्छ। एउटा प्रदर्शनीपछि अर्को प्रदर्शनी गर्नुपर्छ। जो सेवाधारी बच्चाहरू छन्, उनीहरूमा राम्रो सेवाको सोख हुन्छ। बाबासँग कसै-कसैले सोध्छन्– मैले सर्भिस छोडौं? बाबाले हेर्नुहुन्छ– लायक छ भने अनुमति दिनुहुन्छ, ठीक छ, सर्भिस गर। यस्तो खुशीको खबर सबैलाई सुनाउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ– आएर आफ्नो राज्य-भाग्य लेऊ। तिमीले ५ हजार वर्ष पहिला राज्य-भाग्य लिएका थियौ, अब फेरि लेऊ। केवल मेरो मतमा चल।
हेर्नुपर्छ– म भित्र कुन-कुन अवगुण छन्? तिमीले यी ब्याजबाट त धेरै सेवा गर्न सक्छौ, यो फस्टक्लास चीज हो। हुन त पाई-पैसाको चीज हो तर यसबाट कति उच्च पद पाउन सकिन्छ। मनुष्यले पढ्नको लागि किताब आदिमा कति खर्च गर्छन्। यहाँ किताब आदिको त कुरा छैन। केवल सबैलाई कानमा सन्देश दिनु छ, यो हो बाबाको सच्चा मन्त्र। अरूले त सबै झुटो मन्त्र दिइरहन्छन्। झुटो चीजको मूल्य कहाँ हुन्छ र? मूल्य हीराको हुन्छ, नकि पत्थरको। यो जो गायन छ– एक-एक महावाक्य लाखौंका सम्पत्ति हुन्, त्यो यस ज्ञानलाई भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– शास्त्र त धेरै नै छन्। तिमीले आधाकल्पसम्म पढ्दै आएका हौ, त्यसबाट त केही पनि मिलेन। अहिले तिमीलाई ज्ञान रत्न दिन्छु। तिनीहरू हुन् शास्त्रका अथोरिटी। बाबा त ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। उहाँका एक एक महावाक्य लाखौं-करोडौं रूपयाँका छन्। तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। गएर पद्मपति बन्छौ। यही नै ज्ञानको महिमा हो। ती शास्त्र आदि पढेर त कंगाल बनेका छौ। त्यसैले अब यी ज्ञान रत्नको दान पनि गर्नुपर्छ। बाबाले धेरै सहज युक्तिहरू सम्झाउनु हुन्छ। भन, आफ्नो धर्मलाई बिर्सिएर बाहिर भड्किइरहन्छौं। हाम्रो आदि सनातन देवी-देवता धर्म थियो, त्यो धर्म कहाँ गयो? ८४ लाख योनी भनिदिनाले केही पनि बुद्धिमा बस्दैन। अहिले बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– तिमी आदि सनातन देवी-देवता धर्मका थियौ फेरि ८४ जन्म लिएका छौ। यी लक्ष्मी-नारायण आदि सनातन देवी-देवता धर्मका हुन् नि। अहिले धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बनेका छन्। अरू सबै धर्म छन्, यो आदि सनातन देवी-देवता धर्म छैन। जब यो धर्म थियो तब अरू धर्म थिएनन्। कति सहज छ। यहाँ बाबा, यी दादा। प्रजापिता ब्रह्मा छन् भने अवश्य बी.के. अनगिन्ति हुनुपर्छ नि। बाबा आएर रावणको जेलबाट, शोक बाटिकाबाट छुटाउनु हुन्छ। शोक बाटिकाको अर्थ पनि कसैले बुझ्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ– यो शोकको, दु:खको दुनियाँ हो। त्यो हो सुखको दुनियाँ। तिमीले आफ्नो शान्तिको दुनियाँ र सुखको दुनियाँलाई याद गर्छौ। निराकारी दुनियाँ भन्छन् नि। अंग्रेजी शब्द धेरै राम्रा छन्। अंग्रेजी त चलिरहन्छ। अहिले त अनेक भाषाहरू भएका छन्। मनुष्यले केही पनि बुझ्दैनन्– अनि भन्छन् निर्गुण बाल संस्था... निर्गुण अर्थात् कुनै गुण नभएको। त्यत्तिकै संस्था बनाइदिएका छन्। निर्गुणको पनि अर्थ जान्दैनन्। विना अर्थ नाम राखिदिन्छन्। अथाह संस्थाहरू छन्। यहाँ एउटै आदि सनातन देवी-देवता धर्मको संस्था थियो, अरू कुनै धर्म थिएन। तर मनुष्यले ५००० वर्षको सट्टा कल्पको आयु लाखौं वर्ष लेखिदिएका छन्। त्यसैले तिमीले सबैलाई यस अज्ञान अन्धकारबाट निकाल्नु छ। सेवा गर्नु छ। हुन त यो ड्रामा बनिबनाउ छ तर शिवबाबाको यज्ञबाट खाने, पिउने तर केही पनि सेवा नगर्ने हो भने धर्मराज जो दायाँ हात हुन्, उनले अवश्य पनि सजाय दिन्छन्। त्यसैले सावधान गराइन्छ। सेवा गर्न त धेरै सहज छ। जोसुकैलाई पनि प्रेमले सम्झाइराख। बाबाकहाँ कसै-कसैको समाचार आउँछ– म मन्दिरमा गएँ, गंगाघाटमा गएँ। सबेरै उठेर मन्दिरमा जान्छन्, धार्मिक मन भएकालाई सम्झाउन सजिलो हुन्छ। सबैभन्दा राम्रो हो लक्ष्मी-नारायणको मन्दिरमा सेवा गर्नु। ठिकै छ, फेरि उनीहरूलाई यस्तो बनाउनेवाला शिवबाबा हुनुहुन्छ, त्यहाँ गएर सम्झाऊ। जंगललाई आगो लाग्छ, यो सबै समाप्त हुन्छ अनि तिम्रो पार्ट पनि पूरा हुन्छ। तिमी गएर राजाई कुलमा जन्म लिन्छौ। राजाई कसरी मिल्छ, त्यो पछि गएर थाहा हुन्छ। ड्रामा अनुसार पहिला नै कहाँ सुनाउँछु र। तिमीलाई थाहा छ– हामीले के पद पाउने छौं। धेरै दान-पुण्य गर्नेहरू राजाईमा आउँछन् नि। राजाहरूसँग धन धेरै हुन्छ। अहिले तिमीले अविनाशी ज्ञान रत्नको दान गर्छौ।
तिम्रो लागि नै यो ज्ञान हो। भन, आदि सनातन देवी-देवता धर्म स्थापना भइरहेको छ, पतितबाट पावन बनाउने बाबा आउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ– मलाई याद गर, कति सहज छ। तर यति तमोप्रधान बुद्धि छ जसले गर्दा केही पनि धारणा हुँदैन। विकार प्रवेश भएको छ। जनावर पनि विभिन्न थरीका हुन्छन्, कसैमा क्रोध धेरै हुन्छ, हरेक जनावरको स्वभाव अलग हुन्छ। किसिम-किसिमका स्वभाव हुन्छन्, दु:ख दिने। सबैभन्दा पहिला दु:ख दिने विकार हो काम कटारी चलाउनु। रावण राज्यमा हुन्छ नै यी विकारहरूको राज्य। बाबाले त दिनहुँ सम्झाइरहनु हुन्छ, कति राम्रा-राम्रा बच्चीहरू छन्, विचरीहरू कैदमा छन्, जसलाई बाँधेली भनिन्छ। वास्तवमा उनीहरूमा यदि ज्ञानको पराकाष्ठा हुने हो भने फेरि कसैले पनि उनीहरूलाई पक्रन सक्दैन। तर मोहको रग धेरै हुन्छ। संन्यासीहरूलाई पनि घरबार याद आउँछ, धेरै मुश्किलबाट ममता छुट्छ। अहिले तिमीले त मित्र-सम्बन्धी आदि सबैलाई बिर्सिनु छ किनकि यो पुरानो दुनियाँ नै समाप्त हुँदैछ। यस शरीरलाई पनि बिर्सिनु छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। पवित्र बन्नु छ। ८४ जन्मको पार्ट त खेल्नु नै छ। बीचमा त कोही फर्केर जान सक्दैन। अब नाटक पूरा हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई धेरै खुशी हुनुपर्छ– अब हामी जानु छ आफ्नो घर। पार्ट पूरा भयो। उत्कण्ठा हुनुपर्छ– बाबालाई धेरै याद गरौं। यादबाट विकर्म विनाश हुन्छ। घर गएर फेरि सुखधाममा आउने छौं। कतिले चाहन्छन्– छिट्टै यस दुनियाँबाट छुटौं। तर जाने कहाँ? पहिला त उच्च पद पाउनको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। पहिला आफ्नो लक्षण हेर्नु पर्छ– म कहाँसम्म लायक बनेको छु? स्वर्गमा गएर के गर्नेछु? पहिला त लायक बन्नु पर्यो नि। बाबाको सपूत बच्चा बन्नु पर्यो। यी लक्ष्मी-नारायण सपूत, लायक छन् नि। बच्चाहरूलाई देखेर भगवानले पनि भन्नुहुन्छ– यो धेरै राम्रो छ, सेवा गर्नको लागि लायक छ। कसैको लागि त भनिन्छ– यो लायक छैन। बेकारमा आफ्नो पद नै भ्रष्ट गरिदिन्छन्। बाबाले त सत्य भन्नुहुन्छ। पुकार्छन् पनि– पतित-पावन आउनुहोस्, आएर सुखधामको मालिक बनाउनुहोस्। बेहदको सुख माग्छन् नि। बाबा भन्नुहुन्छ– केही सेवा गर्न लायक त बन। जो मेरा भक्त छन् उनीहरूलाई यो रूहानी खुशीको खबर सुनाऊ– अहिले शिवबाबाले वर्सा दिइरहनु भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ– मलाई याद गर्यौ र पवित्र बन्यौ भने पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। यो पुरानो दुनियाँलाई आगो लागिरहेको छ। सामुन्ने लक्ष्य-उद्देश्य देख्नाले धेरै खुशी हुन्छ– म यस्तो बन्छु। सारा दिन बुद्धिमा यही याद रह्यो भने कहिल्यै पनि कुनै शैतानी (दु:ख दिने) काम हुँदैन। हामी यो बनिरहेका छौं फेरि यस्तो उल्टो काम कसरी गर्न सक्छौं? तर कसैको तकदिरमा छैन भने यस्ता-यस्ता युक्तिहरू पनि रच्दैनन्, आफ्नो कमाई गर्दैनन्। कमाई कति राम्रो छ। घर बसेर सबैले आफ्नो कमाई गर्नु छ र फेरि अरूलाई पनि गराउनु छ। घर बसीबसी यो स्वदर्शन चक्र घुमाऊ, अरूलाई पनि स्वदर्शन चक्रधारी बनाउनु छ। जति धेरैलाई बनाउने छौ त्यत्ति तिम्रो पद उच्च हुन्छ। यी लक्ष्मी-नारायण जस्तो बन्न सकिन्छ, लक्ष्य-उद्देश्य नै यही हो। हात पनि सबैले सूर्यवंशी बन्नेमा नै उठाउँछन्। यी चित्र पनि प्रदर्शनीमा धेरै काममा आउन सक्छन्। यसैमा सम्झाउनु छ। हामीलाई उच्च भन्दा उच्च बाबाले जे सुनाउनु हुन्छ, त्यही हामीले सुन्छौं। भक्तिमार्गका कुरा सुन्न हामीलाई मन पर्दैन। यो चित्र त धेरै राम्रो चीज हो। यसमा तिमीले धेरै सेवा गर्न सक्छौ। अच्छा!
१) आफ्नो लक्षण हेर्नु छ– म कहाँसम्म लायक बनेको छु? लायक बनेर सेवाको प्रमाण दिनु छ। ज्ञानको पराकाष्ठाबाट बन्धनमुक्त बन्नु छ।
२) एक बाबाको मतमा चलेर अवगुणहरूलाई भित्रैदेखि निकाल्नु छ। दु:ख दिने स्वभावलाई छोडेर सुखदाता बन्नु छ। ज्ञान रत्नको दान गर्नु छ।
अटल भावीलाई जानेर पनि श्रेष्ठ कार्यलाई प्रत्यक्ष रूप दिने सदा समर्थ भव
नयाँ श्रेष्ठ विश्व बन्ने भावी अटल भएर पनि समर्थ भवको वरदानी बच्चाहरूले केवल कर्म र फल, पुरुषार्थ र प्रारब्ध, निमित्त र निर्माणको कर्म फिलोसोफी अनुसार निमित्त बनेर कार्य गर्छन्। दुनियाँले आशा देख्दैनन्, तर तिमीले भन्छौ– यो कार्य अनेक पटक भएको छ, अहिले पनि हुनु नै छ किनकि स्व परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रमाणको अगाडि अरू कुनै प्रमाणको आवश्यकता नै छैन। साथ-साथै परमात्म कार्य सदा सफल हुनु नै छ।
भनाइ कम, गराइ धेरै– यो श्रेष्ठ लक्ष्यले महान बनाउँछ।